Mareykanka oo Gawaari Gaashaaman ku wareejiyay DANAB | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo Gawaari Gaashaaman ku wareejiyay DANAB
Gawaaridu waxay taageeri doonaan howlgalada iyo awoodda Ciidanka DANAB ee dagaalka ay kula jira argagixisada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa Sabtidii gawaari gaashaaman ku wareejiyay guutada 16-aad ee DANAB ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, oo kaalin muuqata ka qaadanaya la dagaalanka Al-Shabaab.
Gawaarida ay taageeri doonaan howlgalada iyo awoodda Ciidanka DANAB ee dagaalka ay kula jira argagixisada, sida lagu sheegay war kasoo baxay dowladda Soomaaliya.
Taliska AFRICOM ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerida DANAB, oo ah unug katirsan Ciidanka Militeriga Soomaaliya oo Mareykanka uu tababaray, kuwaasoo saldhigooda yahay Beled-Doogle, Shabeellaha Hoose.
Tani waxay imaaneysaa maalin un un ka dib markii Ciidanka Xoogga Dalka ay shaaciyeen in askarta DANAB ay fashiliyeen isku day Jimcihii ay damacsanayd Al-Shabaab, xilli ay ku guda jireen hawlgalo baaxad leh oo ka socday degaanka Jilib Marka.
0 Comments Topics: africom danab
Al-Shabaab oo xubno sare looga dilay dagaal
Warar 17 July 2021 8:56